Tantaran’ny fiangonana – Ecar Sainte Anne Anjomakely
EKAR Mb Anne Anjomakely
Ny Paroasy MB Anne dia mitoetra aty amin’ny 17 km atsimon’ny renivohitra. Manamorona ny lalam-pirenena fahafito izy, ao anatin’ny Commune Bongatsara izay ahitana fokontany enina (6). Avy amin’ireo fokontany ireo ny kristianina mandrafitra ny Fiangonana eto Anjomakely; fa ao koa ny any am-pielezana.
Isika no toy izao dia tao ireo Ray aman-dReny teo aloha nanao ny ainy tsy ho zavatra, niezaka nanorina ny fiangonana, ary ny lasa tsy fanadino, ao koa ireo solofo sy dimby manatrika eto koa heverinay fa tsara ny mampatsiahy kely ny lalana nizorana.
Na mbola tsy nisy Fiangonana akory aza tety amin’ny manodidina dia efa nihaohaody tety ry Mompera Finaz, nanao fisariham-panahy tamin’ny alalan’ny fampianarana katesizy sy hira. Fotoana fohy taorian’izay dia tapaka ny hevitra fa hanorina trano fiangonana teo Antsahamaina izay tsy lavitra eto, ka ny 12 marts 1882 no nahavitan’ny Fiangonana voalohany sy nitokanana izany.
Rehefa nitombo isa ny kristianina dia nanao ezaka ny rehetra ka nanitatra io fiangonana vaovao io ary natao avo kokoa noho ny teo aloha ny rindrina, kanjo teo amin’ny fiomanana tamin’ny fitokanana iny indrindra no ravan’ny rivo-doza izany fiangonana vaovao izany ny alin’ny 18 febroary 1918. Nanao ezaka mafy indray ny rehetra indrindra ireo tanora ka vetivety foana dia nahangona vola, raikitra indray ny fananganana ny fiangonana faha-telo ny taona 1925. Nentanin-kafanam-po be loatra angamba ny tanora sy ny kristianina, ary maika loatra teo am-pananganana ilay fiangonana, ny teknika rahateo tsy ara-dalàna vokany nitriatra ny rindrina, tsy azo nivavahana tao am-piangonana sao dia mitera-doza.
Taorian’izany, ny 11 oktobra 1926, dia nanentana ny kristianina i Mompera PEYRILHE, hanorina trano fiangonana vaovao, ka tapa-kevitra ny rehetra fa hafindra toerana hafa mihitsy, ka dia ny toerana manamorona ny arabe no hanorenana azy, dia izao toerana misy ny fiangonana Anjomakely izao. Niha be olona rahateo ny teto Anjomakely sady nandeha tsara ny varotra na entana io na sakafo. Tamin’ny fotoana nitondran’i Mompera Jean Baptista RAZAFINTSALAMA teo anelanelan’ny taona 1926-1929 no nahavitan’ny trano fiangonana faha-efatra. Rehefa hita fa tsy omby intsony ny Fiangonana dia nitarina sy nohatsaraina izay notokanan’ny Arseveka ny MGR Odon Marie Arsene RAZANAKOLONA, ny 31 oktobra 2010.
Collège Sainte Anne Anjomakely
Ny Ekar Mb Anne Anjomakely araka ny fitantaran’ny Lakroan’i Madagasikara
Chapelle d’adoration Perpetuelle